pamusoro 10 Nzvimbo Dzakavanzika Munyika | Save A Train
musha > Travel Europe > pamusoro 10 Nzvimbo Dzakavanzika Munyika
Rovedza Kufamba Austria, Rovedza Kufamba Britain, Chitima Kufamba China, Train Travel Czech Republic, Rovedza Kufamba Germany, Chitima Kufamba Hungary, Rovedza Kufamba Italia, Chitima Kufamba Poland, Chitima Kufamba Scotland, Chitima Kufamba Switzerland, Chitima Kufamba UK, Travel Europe
Makungwa epasi pevhu, mapopoma akavanzwa, nzira-yakarohwa-nzira quaint mataundi, uye akanaka maonero, nyika izere nezvinoshamisa nzvimbo dzakavanzika. Izvi zvepamusoro 10 nzvimbo dzakavanzika muNyika dzese dzinowanikwa kune vafambi asi dzinowanzoshayikwa. saka, gadzirira rwendo rwekufunga-pfungwa kune zvakanyanya kuvanzika uye nzvimbo dzinotyisa pasi.
1. Nzvimbo Yakavanzika Yakavanzika MuGerman: Berchtesgaden
250 km yemakwara ekukwira, pristine turquoise yegungwa mvura, uye naka yepamusoro, Berchtesgaden National Park ndeimwe yenzvimbo dzepamusoro-dzakavanzika kuGerman.
Iyi paki yenyika iri padyo chaizvo nemuganhu weGerman neAustria uye inogara kunzvimbo dzinoyevedza muBavaria. Nepo vashanyi vazhinji vachienda kune iyo Black Forest, Swiss Alps, kana nzvimbo yeEurope, paki inoshamisa yenyika inofuratirwa. saka, iwe unogona kuve mumwe wevashoma vafambi, kuva nepikiniki ne Gungwa Konigssee, edza kuita musangano kuWatzmann - pa 2,713 metres mukare maonero yemipata, uye zvisati zvamboitika zvisikwa.
Salzburg kuBerchtesgaden Ine Chitima
Munich kuBerchtesgaden Nechitima
Linz kuBerchtesgaden Ine Chitima
Innsbruck kuBerchtesgaden Ine Chitima
2. Nzvimbo Yakavanzika Zvikuru MuItaly: Iyo Monastery yeSanta Maria Dell Isola MuTropea
Vazhinji vevashanyi vachinyura pazororo pamhenderekedzo dzegoridhe dzeTropea havazive nezve ino nzvimbo yakavanda. zvisinei, pamusoro chaipo pemisoro yavo, akagara pamusoro pechikomo chine matombo, yakakomberedzwa neGungwa reTyrrhenian, ndiyo Sanctuary yeSanta Maria dell Isola.
Hazvisi pachena kana monastery yakavakwa nemaBenedictines kana maBaslimans imwe nguva muMiddle Ages. saka, iwe unogona kuwana iyo nhoroondo uye runako kuseri kweiyo monastery yakagadziriswa facade. Hapana mubvunzo, imba yemamongi yakapona 2 kudengenyeka kwenyika, zvirokwazvo inochengeta zvimwe zvakavanzika kwazvo uye zvinonakidza zveCalabria.
Vibo Marina kuTropea Nechitima
Catanzaro kuTropea Ine Chitima
Cosenza kuenda kuTropea Nechitima
Lamezia Terme kuenda kuTropea Nechitima
3. Nzvimbo Yakavanzika Zvikuru muSwitzerland: Trummelbach Falls
Mumupata we 72 mapopoma, iwe unofunga kuti hapana chisina kuzivikanwa mapopoma muSwitzerland, asi chiripo. Imwe yenzvimbo dzepamusoro-dzakavanzika muEurope ndiyo Trummelbach Falls. Rudzi urwu rwe 10 mapopoma-akapihwa mvura yegirazi muSwitzerland, inodyiswa nekunyungudutsa mvura kubva kuEiger neJungfrau.
saka, pakushanya nekufamba nemugomo, kuyemura mapopoma akavanzika aya, pfeka mbatya dzinokudzivirira kubva kumadonhwe emvura anotonhora echando.
4. Seegrotte MuHinterbruhl, Ositiriya
A chikepe rwendo kugungwa repasi pevhu muAustria chiitiko chisingakanganwiki. Izvi zvakakura kuona Grotte muHinterbruhl dhorobha, inzira yemapako, pakutanga kwakagadzirwa nevanhu nekuda kwekuchera, muWWII.
zvisinei, gungwa repasi pevhu rakasiiwa kareko. nhasi, ivo Seegrotte muHinterbruhl, yakashandurwa kuita imwe yepamusoro 10 nzvimbo dzakavanzika dzekushanyira pasi.
5. Nzvimbo Yakavanzika Yakavanzika MuChina: Gomo reSanqing
3 inokatyamadza inokwira kumusoro mumakore, Gomo reSanqing nderimwe remzvimbo dzinoyera kwazvo mutsika dzechiChinese. Maonero egomo reSanqing haangori chete eanotarisisa maonero muChinese nzvimbo, asiwo nerevo inoyera mukutenda kweTao; ari 3 misangano inomiririra iyo 3 Vakachena, vamwari vakakwirira.
Iyo nharaunda yakatenderedza Sanqing zvakare inopa inoshamisa maonero ekuona, trails, uye zvemashiripiti mapoinzi ekuti uwane kubva ku 10 nzvimbo dzinoyevedza munzvimbo iyi. saka, bhuka pachako rwendo rwemazuva maviri kuenda kugomo Sanqing, saka unogona kunakidzwa zvizere uye kuongorora ese akavanzika mavara.
6. Wepamusoro Chakavanzika Nzvimbo MuItaly: Trentino
Runako rweAlpital Alps haisi iyo yepasirese-yakachengetedzwa zvakavanzika. Wese munhu anoziva zvemakomo, nzvimbo, makomo eAlpine, uye anoyevedza meadows. zvisinei, Trentino kuchamhembe-kumabvazuva kweItari, pakati pegungwa Garda nemaDolomites, inowanzo shayikwa munzira inoenda ku zvishamiso zvepanyama zvataurwa pano. Pano iwe uchawana yakatanhamara nhamba ye 297 madziva kuti vawane.
Pamusoro pe, pano chete iwe ndipo paunogona kuyemura yakakosha mwenje mhedzisiro "alpenglow" pane iyo Dolomites 'peaks, pakuvira kwezuva.
7. Nzvimbo Yakavanzika Yakavanzika MuPoland: Sango rakamonyoroka MuSzczecin
Yakasimwa muma '30s, Szczecin sango ndeimwe yenzvimbo dzakavanzika kwazvo dzenyika. Izvi zvinokonzeresa chikonzero icho sango rakadzikwa muPoland, pedyo neguta reGryfino. Kubva ku 400 miti yemipaini yakasimwa kumashure muma30's, nhasi uchaona kuti kwasara vashoma chete, ndichiri kugadzira ino nzvimbo zvachose kushanya.
Chikonzero chechimiro chakasarudzika chakavanzika kusvika nhasi; vazhinji vakaedza kutsvaga kana chakagadzirwa nevanhu kana kushamisika kwechisiko. saka, kana iwe ukafunga kushanya, iwe unogona kutsvaga chakavanzika chemiti yemipaini’ paini yakasarudzika chimiro, uye ongorora imwe ye masango akanaka kwazvo muEurope.
8. Nzvimbo Yakavanzika Yakavanzika MuHungary: Tapolca
Tapolca iguta rinoyevedza muHungary, iri padyo neBaltan Uplands kuchengetedza nzvimbo. Vazhinji vashanyi vanoenda kuHungary kuzororo muBudapest, asi guta reTapolca ndicho chakavanzika chakachengetwa zvakanyanya muHungary. Kuwedzera padyo padyo nepaki huru yenyika, guta rine dziva pakati, nekona yakanaka uye maresitoreti akatenderedza.
saka, kana iwe uchida kuravira chikafu cheHungary, kuyemura uye kuona hunhu hunoshamisa muHungary, nebako regungwa, wobva wabhuka tikiti rako kuenda kuTapolca.
9. Nzvimbo Yakavanzika Yakavanzika MuEngland: Hunstanton, Norfolk
Paunoshanyira guta rekushanyira reHunstanton muNorfolk, ichataridzika seguta rakanyarara rezororo pamhenderekedzo yegungwa. zvisinei, mushure mekufamba uchidzika kuenda kumahombekombe uye kumahombekombe egungwa, iwe uchawana anoshamisa kwazvo mawere. Old Hunstanton mawere zvidimbu zvejecha rine mavara; ngura sandstone yesimbi, tsvuku reraimu rine choko, yakakomberedzwa negirini yakasvibira yegungwa uye gungwa rebhuruu.
saka, iyo yakanaka pamhenderekedzo yeHunstanton inoshamisa chose, kunyanya pakuvira kwezuva. Panguva ino yezuva, mawere anoshandura mavara, pamusiyano uri pakati pegungwa nemawere unotonyanya kusiyana. Zvisinei nerunako rwechisikigo, havasi vazhinji vanoziva yenzvimbo iyi yakavanzika muEast England. saka, zvirinani kurumidza kunyorera yako tikiti tikiti kuenda kumahombekombe eHunstanton, nyika yose isati yaziva.
10. Applecross Peninsula MuScotland
Ichi chishamiso cheScotland chakaitwa kuti chiwanikwe nemugwagwa chete mukati 1975, nemugwagwa unomonereka uye mawere unoyambuka peninsula iri pamhenderekedzo. saka, kana iwe waida kushanyira iri kure gem, iwe waifanira kuvimba nechikepe kufamba wega, sevamwe vasara veichi chitsuwa vagari.
Applecross musha wakanaka wakanaka pamhenderekedzo yepeninsula yeScotland. Makamuri madiki madiki nedzimba dzakapararira pamakomo akasvibira akasvibira, rakatarisana negungwa, achabvisa mweya wako.
Na chete 544 vagari, pane zvikonzero zvishoma zvekufamba kuenda kuApplecross, asi yakajeka uye yakajeka maonero, uzviwanire zvachose nzvimbo seimwe yepamusoro 10 nzvimbo dzakavanzika munyika. Pamusoro pe, Camusterrach naArd-dhubh ndidzo dzimwe nzvimbo mbiri kuti usarasikirwe nekutsvaga kwako, sezvo ivo vasingatombobatwe nekuvandudzwa.
pano pa Save A Train, tichafara kukubatsira kuronga rwendo rusingakanganwike kumusoro 10 nzvimbo dzakavanzika zvikuru munyika nechitima.
Unoda here kupinza yedu blog positi "Pamusoro 10 Nzvimbo Dzakavanzika Munyika ”kupinda yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsn%2Fsecret-places-world%2F – (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
HiddenDestinations YakavanzikaGems chakavanzika ChakavanzikaPlaces TopSecretplacesinEurope